Ndụmọdụ maka ime ịkpụcha mbọ aka n'ụlọ na-adịgide adịgide | Bezzia
Ndụmọdụ maka ịme manicure ọkara na-adịgide adịgide n'ụlọ
Nke Torres | | Mma, Ntu
Ime ịkpụcha mbọ aka gị na-adịru nwa oge n'ụlọ bụ ụzọ ị ga-esi mee ka aka gị zuo oke mgbe niile, yana ntu na-ejikere nke ọma na etemeete maka ụbọchị dịka nke ọhụrụ. Nke a bụ ihe a na -enweta n'ụdị enamel a, n'agbanyeghị na ọ ga -adị irè n'ezie, ekwesịrị iburu n'uche ụfọdụ ndụmọdụ ngwa.
Ma ọ bụghị ya, ị na -etinye ihe egwu na polish ga -ebuli n'isi ụtụtụ, ghara ịma mma dị ka o kwesịrị ma ọ bụ mebie mbọ gị ma ọ bụrụ na i meghị ya nke ọma. Ya mere, nke mbụ na nke kacha mkpa bụ họrọ ngwaahịa dị mma, enamel nwere ezigbo ntụnyere nakwa na ha anaghị emebiga ihe ókè.
A bịa ime ịkpụcha mbọ aka n'ụlọ, ị kwesịrị iburu n'uche na agbanyeghị na ị gaghị echere ka ntu ntu kpoo n'etiti akwa, ị ga-ewepụta oge iji mee ka ọ dị mma. Yabụ na ịkwesighi ịme ọsọ ọsọ, ma ọ bụ hapụ ya na nkeji ikpeazụ ma ọ bụrụ na ị ga -apụ n'ụlọ. Kwadebe elu nwere ezigbo ọkụ, nwere ngwaahịa niile ị ga -achọ n'aka ma nwee ọmarịcha oge n'ụlọ.
1 Nzọụkwụ iji mee manicure ọkara na-adịgide adịgide n'ụlọ
1.1 Otu esi etinye ntu ntu ọkara na-adịgide adịgide
Nzọụkwụ iji mee manicure ọkara na-adịgide adịgide n'ụlọ
Ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ahụ iche iche ma ọ bụ jiri ngwa zuru oke nke tinyegoro ihe niile ịchọrọ. Ihe ị chọrọ ime manicure ọkara na-adịgide adịgide bụ:
Oriọna na -ehicha, LED ma ọ bụ UV
Enamels pụrụ iche maka ịkpụcha mbọ aka
Ntọala na akwa mkpuchi kpọmkwem maka ịkpụcha mbọ aka
Osisi oroma maka ịkpụcha mbọ aka
Faịlụ Nke mbọ
Ugbu a anyị nwere ngwaahịa niile dị mkpa yana agba ahọrọ maka manicure ọkara na-adịgide adịgide, oge eruola ịkwadebe tupu ịmalite na ntu ntu. Ọ dị ezigbo mkpa ịkwadebe mbọ nke ọma maka nsonaazụ ọkachamara. Bido site na iji acetone wepu polish ochie, jiri osisi oroma ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji wepu ihe ọ bụla na -acha.
Debe ntu ahụ n'ụzọ ọ na -emebu ma wepu nke ọma nke fọdụrụ na nsọtụ ntu ahụ ka ọ ghara imebi ọrụ na -esote. Sịnye aka gị na mmiri ncha na -ekpo ọkụ nkeji ole na ole iji mee ka ịkpụkpụ ahụ dị nro na jiri osisi oroma, wepu akpụkpọ ahụ azụ. Mechaa ịhịa aka n'ahụ jiri ude aka wee mee ka akụkụ ahụ dị nro nke ukwuu.
Otu esi etinye ntu ntu ọkara na-adịgide adịgide
Ozugbo akpụkpọ ahụ etinyela ude aka, ọ bụ oge ịmalite itinye ncha. Nke mbụ, jiri swab mmanya na -ehicha ntọala nke mbọ ahụ iji wepụ ihe ọ bụla fọdụrụ, ya mere enamel ahụ na -ejigide nke ọma. Ugbu a, anyị ga-ebido na usoro enamel ọkara na-adịgide adịgide.
Tinye akwa mkpuchi primer enamelling ọkara na-adịgide adịgide. Tinye aka na oriọna ahụ maka sekọnd 30.
Mgbe ah tinye akpa mkpuchi nke ntu ntu a họọrọGbaa mbọ hụ na ọ bụ akwa dị ezigbo mkpa ka afụ ghara ịpụta. Wepụ ngafe nke nwere ike idobe na akpụkpọ ahụ ya na mkpisi oroma. Debe ntu gị na oriọna ma hapụ ha ka ha kpọnwụọ maka sekọnd 60.
Maka agba ọ bụla nke na -apụtaghị ìhè, mkpuchi abụọ ga -adị mkpa. Yabụ na ọ bụ oge itinye mkpuchi nke abụọ enamel nwere agba. Gbalịa mee ya ka ọ bụrụ akwa dị larịị ma ọ bụrụ na ị ga -apụ ntu ahụ, jiri mkpanaka wepu ya tupu gwọọ enamel na oriọna maka sekọnd 60.
Ugbu a, ị ga -etinye akwa mkpuchiỌ bụ oyi akwa ikpeazụ na nke ga -echebe enamel ahụ ọtụtụ ụbọchị. Tinye akwa mkpuchi dị elu ma gwọọ ya na oriọna ahụ maka sekọnd 30.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ihe kacha atụ egwu na mbụ, mana ị ga -ahụ na ọ nweghị ihe na -eme. Iji mechaa ị ga -emerịrị ya were mkpo owu na mmanya na -egbu mbọ mbọ. N'ụzọ dị otú a, ị na -ewepụ mmiri ma hapụ mbọ zuru oke.
Site na usoro ndị a, ị ga -enweta nweta manicure ọkara na-adịgide adịgide n'ụlọ mgbe ọ bụla ịchọrọ, n'agbanyeghị na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhapụ ntu ahụ zuru ike ka ọ ghara imebi ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Ndụmọdụ maka ịme manicure ọkara na-adịgide adịgide n'ụlọ
Agwa agwa na ham na ugu puree
Omume 3 iji belata eriri katrij